Myanmar Gays Heaven: မြန်မာလို့တော့ထင်တာပဲ မေးလ်ကနေပို့လိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
နောက်တခါပို့ပေးရင် နာမည်လေးတွေပါ ထည့်ပေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့
Posted by Hot Boy at 2:32 AM
koko luuchaw November 9, 2013 at 12:14 PM
ဆွဲချင်တယ်ဗျာ ကျနော်ကတော့ပ်ပါ finloepaymal.mm2013@gmail.com
koko luuchaw November 9, 2013 at 12:16 PM
အဲ့ဒီခရေလေးတွေကို စားချင်ပါတယ် လိုးချင်စရာပဲဗျ finloepaymal.mm2013@gmail.com ကိုအက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ..
mryan yan November 9, 2013 at 2:41 PM
where are u now?l am ko naing.l live in northoakkalar.09250581420.testis is more than 6inches.do u like?you must be homo.
Anonymous November 23, 2014 at 9:27 AM
Ko naing ရဲ့လီးကိုစုပ်​ချင်​တယ်​cakecreamx@gmail.com ပါ
ဖိုးသား November 10, 2013 at 7:05 AM
moenetmg22@gmail.com November 11, 2013 at 6:10 PM
မှုတ်ပေးမယ် အလိုးပါခံမယ် 09250000924 ဆက်သွယ်ပါ
ဒီနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့ အခါ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလားမသိ သူများစသွားတာလားမသိ ဘာတွေလာပြောနေလဲလို့ ပြောပါတယ်
Anonymous February 2, 2014 at 1:42 AM
ခံချင်တယ် 0931204505 ကိုဆက်ပါ
kyawkzyw@ gmail.com topပါ
aung ko November 17, 2013 at 10:06 AM
ph0ne num leave .or my mail is sawyai 123@gmail.com.i am 23 years .you intreset me you connect me.i am bottom.
I want mail address of the guy on fourth photo.and i am intrested in u. My phone is 09423704663.pls contact me
ဖုန်းဆက်ကြည့်တဲ့ အခါ hm.မဟုတ်ဘူးဟုပြောပါသည်သူများ နောက်ပြီး တင်တာဖြစ်နိုင်ပါသည်
Anonymous February 2, 2014 at 1:49 AM
ကျ တော် က တော့ အ ပြန် အ လှန် စိတ် တူ ကိုယ် တူ ဟို မို သယ် ချင်း တ ယောက် ရ ချင် တယ် ဗျား။
yankorlatt May 10, 2014 at 12:12 PM
Myitkyina က ဟို မို သယ် ချင်း တ ယောက် လို ချင် တယ် ဗျ။ ကျ တော် လဲ ဟို မို ဘဲ။
myitkyina က gmail အကောင့်ထားခဲ့လေ
Anonymous November 4, 2015 at 2:57 AM
fhhjk August 2, 2014 at 2:21 PM
wai lin October 29, 2014 at 11:03 PM
​ဝေလင်း October 29, 2014 at 11:06 PM
​ဝေလင်းလို့​ခေါ်ပါတယ်​ boyfriend လိုချင်​ပါတယ်​09972376676 viber မှာခင်​လို့ရပါတယ်​
Peter König October 31, 2014 at 1:44 AM
Than Zaw July 28, 2015 at 10:31 AM
min khant moe October 1, 2015 at 8:04 AM
even taylor October 31, 2015 at 7:04 PM
Nice guy's ;-)